होटल TIA हाइट्स Makadi खाडी (मिश्र), 2000 मा निर्माण र विस्तार 2012 मा जीर्णोद्धार, सीआईएस देखि पर्यटकहरु द्वारा frequented यस होटल जटिल। समीक्षा द्वारा न्याय, तिनीहरूलाई को सबै भन्दा सकारात्मक, अतिथि को सेवा केही साना कमजोरीको अझै पनि ठाउँ छ। तर, यो परिस्थितिमा परमिट को लोकतान्त्रिक मूल्य भन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिइएको छ। अप्रिल-मे 2015 मा त्यो (बेंचमार्क लागि, हामी भ्रमण मूल्य2वयस्क7रातका लागि उडान संग मास्को देखि लिएर फिर्ता) प्रति कोठा मानक बालुवाको ढिस्को कोठा $ 950 र प्रति कोठा $ 1010, Lagoon कोठा (होटल कोठा को विस्तृत वर्गीकरण छ तल प्रस्तुत छ)। तथापि, मनोरञ्जनको लागि, यो जानिन्छ होटल को दर्जा चयन, बाहेक, यो पनि एक विश्वसनीय र जिम्मेवार भ्रमण अपरेटर को विकल्प मा महत्त्वपूर्ण छ।
सम्भावित पर्यटकहरूको को TIA हाइट्स Makadi खाडी होटल मा सबै भन्दा राम्रो भ्रमण को लागि देख छ जो अनुभव हलिडे, को सिफारिसहरू द्वारा प्रमाणित, भ्रमण अपरेटर कम्तिमा तीन वर्ष काम गर्नेछ, र देश मा धेरै शाखा छ एक चयन गर्नुपर्छ। सबैभन्दा व्यावहारिक रूसी पर्यटक सम्भव जोखिम कम गर्न, त्यसैले यस्तो "उमंग", "Sanmar", "कोरल", "Intourist र", "ध्रुवीय" प्रमुख संचालक बाट TIA हाइट्स Makadi खाडी गर्न भ्रमण किन्न रुचाउँछु।
होटल स्थान। समीक्षा
हामीलाई अघि मुद्दा होटल जटिल Hurghada देखि तीस किलोमिटर हटाइयो। को राय मा, ग्राहकहरु बहुमत जस्तै गोपनीयता: को व्यस्त रिसोर्ट शहर को bustle देखि सिद्ध परिवार छुट्टी टाढा। होटल नै नाम को सहारा को बीचमा Makadi खाडी को तट को पहिलो लाइन मा स्थित छ। खाडी नै आराम स्थान वर्णन, अनुपम पानी संसार, यो Divers लागि आकर्षक बनाउँछ favoring, बलौटे समुद्री तट छ।
तट मा दस five- र चार-तारे अन्तर्राष्ट्रिय होटल नेटवर्क छ। होटल को quay क्षेत्र - स्थानीय हलिडे विचरण लागि एक लोकप्रिय ठाउँ। यो समीक्षा, पूर्वी-शैली क्याफे, हुक्का, रेस्टुरेन्ट को समग्र प्रभाव पढ्न पर्याप्त छ, र यो स्पष्ट हुन्छ: यो ठाउँ पर्यटकहरु आकर्षित गर्छ। रेस्टुरेन्ट, बारहरू, पसलहरूमा संग कुल पैदल क्षेत्र, एक डिस्कोथेक कुनै पनि होटल को अतिथि, TIA हाइट्स Makadi खाडी5* सहित लागि उपलब्ध छ।
हेरिएको होटल - ठूलो पर्याप्त। उसलाई स्वामित्वको इलाका को प्रभावशाली क्षेत्र - 100 000 मिटर 2। यसलाई राम्ररी groomed छ। मुख्य तीन मंजिल्ला, 29 दुई-मंजिल्ला घरहरू, 12 दुई-मंजिल्ला विला,9चार मंजिल्ला अपार्टमेन्ट ब्लक: पर्यटकहरु नै आतिथ्य भवन रहन लिन यहाँ छन्।
6400 मिटर2को अद्वितीय विशाल पूल क्षेत्र - होटल जटिल एक पानी पार्क छ, पूल, तिनीहरूलाई बीच को सम्पूर्ण नेटवर्क को निर्वाचकगण। उहाँबाट छाप हलिडे रेभ, तिनीहरूलाई केही (पानी र पौडी खेल मा खेल को प्रशंसक) पनि समुद्र पूल रुचाउँछु। खैर, यो गरम छ। TIA हाइट्स Makadi खाडी5* (यहाँ 30 पानी स्लाइडहरू!) आकर्षण को एक प्रणाली धन्यवाद पूर्वाधार छुट्टी नजिक पानी पार्क गर्न। त्यसैले, कहिलेकाहीं शब्द "पानी पार्क" यसको नाम मा पाइन्छ।
को उल्लेख superbasseyna बाहेक, होटल एक आउटडोर गरम स्विमिंग पूल, बच्चाहरु को लागि छाँटकाँट, साथै होटल जटिल को अतिथि आराम पौडी खेल्न सक्छन् जसमा निजी, र मा रूपमा हावाको जाडो महिना विशेषताहरु।
समुद्र तट र पूल साथै चिकित्सकीय विकल्प होटल TIA हाइट्स Makadi खाडी5* यहाँ परिभाषित एक स्पा जहाँ साँचो व्यवसायीक रूपमा कार्य। यो केन्द्र - तट मा सबै भन्दा राम्रो को एक। होटल तर समग्र थर्मल जोखिम, अतिथिहरू peeling, स्थानीय स्पा अनुहार उपचार, मालिश सेवा, सुगन्ध मालिश प्राप्त।
तर, पर्यटक जो चाहनुहुन्छ होटल सेवा र पानी पार्क-केन्द्रित उहाँलाई भ्रमण खरीद अधिकतम सीमा प्राप्त गर्न, तपाईं होसियार हुनुपर्छ। TIA हाइट्स Makadi खाडी4* - वास्तवमा, Makadi त्यहाँ यस्तै नामको चार तारे होटल छन्।
कोठा को प्रकार
एक ठूलो पाँच तारे होटल जटिल TIA हाइट्स Makadi 1062 कोठा पर्यटकहरु को विविध आवश्यकता पूरा गर्न सुसज्जित प्रदान गर्दछ। तिनीहरू यहाँ मुख्य प्रकार हो।
तीन-मंजिल्ला भवन मुख्य रूप3व्यक्ति (2 + 1) को अधिकतम लिएर, 32 मिटर2को कोठा 465 प्रकार मानक मुख्य भवन कक्ष क्षेत्र मा स्थित समावेश। यो सबैभन्दा महंगा कोठा छ।
दुई-मंजिल्ला भवन4मान्छे (2 + 2) को 35-37 मिटर2गणना अधिकतम5* TIA हाइट्स Makadi खाडी 160 disposed कोठा प्रकार मानक Lagoon कोठा (औसत मूल्य) क्षेत्र। यी अपार्टमेन्ट अक्सर समीक्षा द्वारा न्याय, पर्यटक हटाइएका छन्। 35-37 मिटर2- यहाँ कोठा मानक बालुवाको ढिस्को कोठा (सबैभन्दा किफायती मूल्यहरु मा) नै क्षेत्र संग को 208 प्रकार छन्। तीन-मंजिल्ला भवन 31 मिटर2को यात्री 191 ढाँचा नम्बर छुट्टी कोठा कुल क्षेत्रको लागि सुसज्जित।
को TIA हाइट्स Makadi खाडी वायु र उच्च कोठा मा उपलब्ध छ। तिनीहरूलाई हुन् 16 षाले टाइप जीवित कोठा, बेडरूम र बाथरूम संग 48 मिटर2को उच्च कक्ष क्षेत्र। आफ्नो क्षमता -2+2मान्छे।
सुधार जीवित अवस्था र7कोठा छ, 39 मिटर2को ट्रान्सफर्मर प्रकार जुनियर सुट क्षेत्र। आफ्नो सुविधा - प्रति se बेडरूम को अभाव मा। त्यो collapsible बेड, दिन को समयमा जीवित कोठा attachable प्रतिस्थापित।
त्यहाँ एक होटल र दुई लक्जरी राष्ट्रपति सुइट्स (राष्ट्रपति सुइट), एक कार्यालय, धेरै बेडरूम र बाथरूम छ।
पनि होटल जटिल TIA हाइट्स Makadi खाडी वायु मा जडान कोठा (एक अन्य पास-ढोका जडान), साथै गैर-धूम्रपान अपार्टमेन्ट र सीमित गर्न छाँटकाँट छ को मोटर गतिविधि असक्षम मान्छे।
होटल कोठा लागि उपकरण
म होटल जटिल आफ्नो कोठामा बास हुनेछ, अतिथि बाँकी बालकनी या छत लागि रमाइलो गर्न सक्षम छन्। समीक्षा द्वारा न्याय, धेरै पाहुनाहरूलाई सुसज्जित एउटा सानो संग बालकनी मा एक साँझ सोख आनन्द कफी टेबल र कुर्सियों को एक जोडी।
यो वातानुकूलन, टिभी, टेलिफोन, सुरक्षित साथ अतिथि कोठा प्रदान गर्दछ। एक मिनीबार चार्ज। भुक्तानी गर्ने कोठा मा इन्टरनेट छ। फोन मार्फत होटल5* TIA हाइट्स Makadi खाडी को मेहमान स्वागत कुराकानी गर्न मात्र होइन, तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय संचार को अवसर लाभ उठाउन मौका छ।
होटल कम्प्लेक्स कर्मचारी कोठा र ओछ्यानमा सनी को परिवर्तन को दैनिक सफाई बनाउँछ।
दुई अवधारणाहरु मा मध्यरात गर्न 10:00 देखि संगठित अतिथि भोजन: सबै Inclusive र अल्ट्रा सबै समावेश। होटल अतिथि आधारभूत खाद्य तीन मुख्य रेस्टुरेन्ट मा एक दिन पटक, साथै नाश्ता र पेय (मादक र नरम मिश्रको) प्राप्त। तपाईं चयन भने सबै Inclusive खाना अवधारणा मात्र आयात मादक पेय, आइसक्रिम र ताजा रस (ताजा रस) भुक्तानी छन्। अल्ट्रा सबै Inclusive को फराकिलो अवधारणा, माथिका सबै बाहेक पनि एक पटक रेस्टुरेन्ट मा होटल निःशुल्क खाने (नियुक्ति गरेर) मा आफ्नो रहन समयमा, सेवा ला à कार्टे समावेश छ। पनि होटल अतिथि TIA हाइट्स Makadi खाडी एक्वा सबै Inclusive अवधारणा अल्ट्रा रूपमा आयात मादक पेय मुक्त नम्बर हो।
माछा, प्राच्य चिनियाँ र इटालियन: बाहेक मुख्य रेस्टुरेन्ट "अलाड्डीन" होटल को मुख्य शरीर को पहिलो र दोस्रो फर्श मा सञ्चालन, होटल जटिल मा पनि चार रेस्टुरेन्ट छ। तिनीहरूले आदेश हुन सक्छ 'ला' कार्टे खाने। यो पनि एक क्याफे, पाँच बारहरू र हुक्का प्रदान गर्दछ। उत्तरार्द्ध प्राच्य शैली सजाया छ। सहज सोफे, अरबी चित्रहरु र असामान्य दीपक सहज केबिन र धेरै मूल कोठा सजाउनु।
Makadi मा सबै भन्दा राम्रो को एक - पर्यटकहरु को विकल्प यस होटल द्वारा के यसको बीच प्रभावित कम से कम छैन छ। TIA हाइट्स Makadi खाडी (हामी कर्मचारीलाई आदर तिर्न पर्छ) सही हालत मा समावेश छन्। अतिथि को समीक्षा अक्सर कृतज्ञ भई समुद्रमा एक चिल्लो प्रवेश संग 500 मीटर को यो राम्रो-groomed र राम्रो-बालुवा पट्टी लम्बाइ उल्लेख छन्।
सबै अतिथि पर्याप्त छाते र सूर्य loungers छ। नजिकै अतिरिक्त हावा उछाल मा छाते संग सुसज्जित छन्।
समुद्र तट TIA हाइट्स Makadi खाडी को पानी मा समुद्र नै धेरै सफा। Corals एक गहिराई मा फेला छन्। समुद्र तट को बायाँ यसलाई जहाँ डुङ्गा moored छन् एउटा सानो होटल घाट संग सुसज्जित छ। Makadi को हावा चलेको मौसम को स्थिर सुविधा छ। एक ताजा northerly breezes समुद्र मा बाँकी सीमित गर्न छ, विशेष गरी हिउँदमा प्रसन्न, तर यो ठूलो हावा गर्न परिलक्षित छ।
समुद्र तट काम एनिमेटरहरु मा राम्रो, रमाइलो वातावरण कायम राख्न र छोराछोरीलाई विशेष ध्यान।
पानी पार्क, पानी स्लाइडहरू, पूल
निस्सन्देह, TIA हाइट्स Makadi खाडी एक्वा छनौट पक्षमा बलियो तर्क एक पानी पार्क छ। यहाँ सबै राम्रो कायम र सुन्दर छ। धेरै होटल अतिथि समुद्र तट यसको क्षेत्रमा रहन रुचि र छैन। विशेष गरी यो रेस्टुरेन्ट कुपन लिनुको पछि, दायाँ पानी पार्क भोजन र Waiters पूल scurrying तिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्न सम्भव छ।
पानी पार्क काम यसको peculiarities छ। स्लाइड 10 17 00 12 00 र 13 00 पानी 00 संग आपूर्ति हुन्छ।
स्लाइडहरू को सफल डिजाइन। बच्चाहरु साँच्चै ठूलो खुशी तिनीहरूलाई चढेर प्राप्त। पानी मा आरामदायी स्नान: बच्चाहरु र वयस्क लागि सबै गर्म स्विमिंग पूल।
कर्मचारी TIA हाइट्स Makadi खाडी पानी पार्क अतिथि को इच्छा गर्न चाँडै प्रतिक्रिया। तपाईंलाई रुचि छैन (उदाहरणका लागि, पर्याप्त रबर को छल्ले) समुद्रीतट मा केहि, तपाईं बस केटी-gerlreleyshen बताउन भने, त्यो अर्को कर्मचारी भनिन्छ र सर्कल ल्याउन। विशेष यस सन्दर्भमा लजालु आवश्यक छैन।
विचार अन्तर्गत होटल जटिल द्वारा प्रस्तावित क्लासिक होटल सेवाहरूबाट अलग, पर्यटक पनि थप रमाइलो।
जो बढी सक्रिय फिरऊनको देश को ठाँउहरु थाह प्राप्त गर्न, इच्छा motorists एक कार भाडामा मौका छ। वरिपरि होटल त्यहाँ कार पार्क गर्न सकिन्छ पार्किङ छ। Hurghada मा Makadi को फ्रीवे छ एक-तरिका यातायात। अझै पनि, पर्यटक, अनुभव को प्रारम्भिक दिनमा चालक संस्कृति आघात औसत गति स्थानीय चालक को ट्रयाक मा। तिनीहरूले अक्सर अन्तर्गत 180 मी / घन्टा गति मा हतार।
फल किन्न, तपाईं (समुद्र सामना गर्दा) होटल TIA हाइट्स Makadi खाडी बाट दाहिने तिर जाने गर्न सक्नुहुन्छ। मूल्यहरु दुई पसलहरूमा, त्यहाँ noticeably (प्रतिशत चालीस) होटल जटिल को भण्डारमा भन्दा कम हो। उदाहरणका लागि, $7पद $ 12 लायक साधारण एक किलो।
यो फ्याक्सहरु, पार्सलहरू र postage पठाउन र प्राप्त गर्न सम्भव छ: हुलाक कार्यालय होटल मा काम गरिरहेको छ। सुविधाको लागि, अतिथि छ नि: शुल्क वाइफाइ।
तपाईं व्यापार घटनाहरू पकड व्यापार केन्द्र र सम्मेलन कोठा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कारण संचार उद्यमी लागि आधुनिक कार्यालय उपकरण र सफ्टवेयर प्रदान होटल व्यवसाय चासो को स्कोप आफूलाई लागि सामान्य देखि पृथक महसुस गर्दैन।
र होटल जटिल TIA हाइट्स Makadi खाडी को पाहुनाहरूलाई मूल्य-जोडी सेवाहरू (लाँड्री, शुष्क सफाई, परिवार डाक्टर सेवाहरू) प्रदान गर्दछ। आफ्नो गाइड मार्फत भ्रमण अपरेटर सक्रिय अतिथि पर्यटन को एक किसिम प्रदान गर्दछ। र गाइड (यो सबै होटल को लागि एक साधारण अभ्यास छ), यो स्पष्ट अत्यधिक भ्रमण भाडा बाबजुद, आर्थिक उत्प्रेरणा सम्भव पर्यटकहरु रहन्छ रूपमा धेरै लागू गर्न। शहरी पर्यटन यात्रा एजेन्ट को दर संग तुलना Overpayment 25-50% छ।
होटल सेवाहरू: नि: शुल्क र भुक्तानी
म होटल बास हुनेछ, अतिथि मुक्त सेवाहरूको दायरा हकदार छन्। तिनीहरूले भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ होटल टेनिस कोर्ट, प्ले डार्ट्स, चेस को छ, बीच भलिबल खेल, मिनी फुटबल, एरोविक्स भाग। तिनीहरूले डिस्को र साँझ शो को लागि नियमित रूपमा सङ्गठित छन्।
शुल्क आधारित सेवाहरूको दायरा थप प्रभावशाली। टेनिस रैकेट र बल, स्पा सुविधा, घोडचढी, डाइभिङ, मिनी गोल्फ, पानी स्किइङ, सर्फिङ यस किराया।
होटल काम कान्छो अतिथि (खेल कार्यक्रम द्वारा आयोजित) को लागि930 17 00 seater मिनी-क्लब "रवि बच्चाहरु"। विभिन्न गतिविधिहरु दुई उमेर उपसमूहहरु सञ्चालन:47 वर्ष र712 वर्ष देखि।
रूसी भाषा बोल्ने एनिमेटरहरु छोराछोरीको मा बच्चाहरु को लागि आराम बोरिंग छैन संगठित पानी स्लाइडहरू र खेल को मैदानों। साँझ बच्चाहरु आशा मनोरञ्जन कार्यक्रम (देखि 19 30 21 30)। "मिनी डिस्को" - को त्यो भनिन्छ सानो को, अनि पुरानो बच्चाहरु को लागि SubGroup "! राम्रो साँझ शनि" को लागि।
यात्राको कहाँ किन्न?
फिरऊनको देश लोकप्रिय पर्यटक छुट्टी गन्तव्यहरू को छ। तथापि, आँखा बंद सीधा होटल मा यात्राको खरीद - हाल अधिक महंगा छ। हाम्रो आत्मपुरक सिफारिस (राजमार्गहरू ड्राइभिङ कुरूप मिश्र को जोखिम दिइएको) हो: होटल गाइड मा किन्न दुई यात्राको (सबैभन्दा टाढा, उदाहरणका लागि, कायरो वा यरूशलेममा) एक। त्यहाँ प्राथमिकता सुरक्षा मापदण्ड छ। यात्राहरु, छोटो दूरी बढ्दै मुछिएको, तपाईं अडिट गरिएको शहरी यात्रा एजेन्सीहरू मा (काम इतिहास को तीन वर्ष को एक न्यूनतम संग) खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
छोटकरीमा धेरै पर्यटन बताउन - व्यापार कार्ड मिश्र।
गिजा, तीन को प्रसिद्ध टुकडी को पठार मा कायरो को वरपर, मा पिरामिड (Cheops, Chephren र Mycerinus) र Sphinx को विशाल मूर्तिकला। राजधानी मा सबै भन्दा प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विश्व प्रसिद्ध छ , कायरो संग्रहालय प्राचीन सभ्यता को अवशेषहरूको - प्रदर्शन समावेश। Luxor (प्राचीन मा नो) दफन को वास्तु ensembles संरक्षित आकर्षित गर्छ।
डाइभिङ मा कौशल, रोचक यात्राहरु, डाइभिङ संग अतिथि लागि।
निस्सन्देह, सबै यात्रा - मुक्त छैन। तपाईंलाई थाहा रूपमा भ्रमण अपरेटर द्वारा बेचिएको मा शहरी यात्रा एजेन्सीहरू भन्दा बढी महंगा यात्रा।
हामी किन यात्राहरु मा यस्तो विवरण रोक्न गर्नुभयो? जो संग अत्यधिक रचनात्मकता को कुरा तिनीहरूले लागू अतिथि TIA हाइट्स Makadi खाडी। एक विशेष भ्रमण अपरेटर बाट खरिद पर्यटन बस उसलाई यात्राको लिन दायित्व वहन गर्दैन। तर, होटल गाइड को अतिथि यात्राहरु पूर्ण सूची आयातित प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। साथै, गाइड आफ्नो बीमा तिनीहरूले भ्रमण अपरेटर नियन्त्रणमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने मात्र मान्य छ भुक्तानी कि mischievously नजान्ने पर्यटकहरु व्याख्या। यो साँचो होइन: बीमा यस कारक बिना मान्य छ।
कुनै पनि मामला मा, पर्यटन सम्बन्धित मुद्दाहरू, गाइड संग तर्क गर्न यो किनभने तिनीहरूले उत्प्रेरित छन्, आवश्यक छैन। यो बेकारी छ। बस टाढा जाने।
ह्यान्डल गर्न कर्मचारी देखि आफ्नो बुकिंग को प्रश्न कसैले गर्न। समीक्षा
खैर, होटल घरबार मा थिचेर मुद्दाहरू धेरै र जीवित छैन byazatelno गाइड हिम्मत। यो भनेर महंगा पर्यटन किन्न इन्कार गरेपछि तिनीहरूले "आहत", र तिनीहरूलाई देखि सल्लाह, तपाईं प्रतीक्षा छैन सम्भव छ। तर, यो सामान्य अभ्यास हो। एक बाँकी अनुसार, हामी TIA हाइट्स Makadi खाडी गाइड मा अनावश्यक रिलायन्स राख्न हुँदैन। तिनीहरूलाई विरुद्ध अतिथि समीक्षा समावेश कि पर्यटकहरु भ्रमण किन्न छैन संकेत टिप्पणीहरू, तिनीहरूले चाँडै सबै चासो गुमाउन। मेहमान लबी मा बोर्ड मा घोषणाहरू लागि आँखा बाहिर राख्न सिफारिस गरिएको हो र त्यसपछि consultations परेशान छैन। निस्सन्देह, यो अव्यावसायिक छ।
"आहत" गाइड अक्सर disadvantageous अतिथि यसको स्पा प्रस्तुत गर्न बिर्सन्छन्। सिद्धान्त, यस परिवर्तन गर्दैन केहि - मानिसहरू चाहिन्छ भनेर पहिचान हुनेछ र हैमम, बाफ कोठा, सना भ्रमण, एक पेशेवर मालिश जानुहोस्। यी औषधी सबै अपेक्षाकृत उचित मूल्यहरु मा उपलब्ध छन्।
तसर्थ, गाइड विश्व ठूलो पर्याप्त छ। त्यहाँ एक वैकल्पिक छ। हामी हाम्रो अतिथि होटल को एक योग्य महिला कर्मचारीहरु, को स्वागत को सही, गर्न स्थित को सल्लाह खोज्न सुझाव - gerlreleyshenz।
अतिथिहरूको Hurghada मा यात्रा होटल
मिलनसार र पार्टी पर्यटकहरु वा अतिथि को एक वातावरणमा एक छुट्टी खर्च गर्न इच्छुक, अक्सर Hurghada को नाम अन्तर्गत शहर ट्याक्सी सवारी द्वारा डाइभिङ मा एक ठूलो चासो बढुवा। TIA हाइट्स Makadi खाडी उदार आफ्नो अतिथि प्रान्तीय राजधानी discos संगठित आपूर्ति। र यहाँ जहाँ Buck छ। परंपरागत, यूरोप हार्ड रक क्याफे मा जानुहोस्। को "अम्लीय" युवा बीच विशेष गरी लोकप्रिय उठाउँछ हवाना क्लब। छलफल अपेक्षाकृत सस्तो क्लब "क्यालिप्सो": $ 15 को एक प्रवेश शुल्क तिर्ने, विकल्प मा एक आगन्तुक स्वतः बियर एक गिलास वा रक्सी एक गिलास प्राप्त गर्नेछ।
Hurghada गर्न तिर्खाएको युवा मजा साथै (बिहान हुनत) मा शहर को ठाँउहरु र जो पानी खेल रुचि खेलाडीहरूलाई हेर्न चाहने जानुहोस्।
सबैभन्दा प्राय भ्रमण होटल अतिथि महल "हजार र एक रातों", एक पानी पार्क "टाइटैनिक" Oceanarium "लाल समुद्र", समुद्री जीव विज्ञान संग्रहालय, प्राचीन रोमन बन्दोबस्त Mons Klaudianus मसीही कपटिक चर्च को भग्नावशेष। माथिको साइटहरू भ्रमण पछि होटल अतिथिहरू अक्सर साथ धेरै किफायती मूल्यहरु फल, शीतल पेय, मेट्रो श्रृंखला पसलहरुमा केही विदेशी समुद्री त्यहाँ स्थित मा आफु को लागि घूस छन्।
Hurghada - Divers लागि
होटल जटिल हुनत र यसको आफ्नै डाइभिङ केन्द्र छ, तर उत्साही कोरल को एक किसिम को लागि विश्व अन्वेषण सीधा सही पानी आफ्नो डुङ्गा को वितरण देखि डुबुल्की मार्न गर्न Hurghada, लाल समुद्र, प्रान्तीय राजधानी मा सबै भन्दा राम्रो डाइभिङ क्लब सबैभन्दा छाप प्राप्त गर्छन। आखिर, TIA हाइट्स Makadi खाडी कोरल रीफ नजिकै रहेको साथै एकदम संकुचित, Hurghada नजिकै मुख्य रीफ तटीय क्षेत्र बाट टाढा टाढा अवस्थित छ। तिनीहरूले रीफ माछा र प्रकृति को विभिन्न समुद्री वस्तुहरु, भुक्तानी समुद्री पार्क मा Giftun द्वीप को वरपर स्थित को आबादी भीड। सबैभन्दा तिनीहरूलाई कोरल उद्यान बीच प्रसिद्ध - एक Shaab रूर उम्म Gamar पनि लाल समुद्र को एक विश्वकोश भनिन्छ जो, र Gota अबू Ramada।
तर, सबै भन्दा रोचक ठाँउ, Hurghada को पानी क्षेत्रमा Divers अनुभव गर्छन जो Carless प्रवाल, जो पनि Moray eels को घर भनिन्छ छ।
यस होटल मा रहन गोताखोरों हामी एक छेड्नु नीलो गर्न रीफ उद्यान माथि, वैविध्यपूर्ण प्यालेट मा चित्रित, उज्ज्वल गुलाबी देखि भ्रमण गर्छन (खैर, जीवित मात्र कोरल चित्रित छन्)।
, TIA हाइट्स Makadi खाडी5* होटल जटिल बारेमा हाम्रो कहानी अन्तिम आफ्नो ट्रेडमार्क सम्झँदा मा विशेषताहरु: यस होटल र पानी पार्क 30 रोमाञ्चक पानी स्लाइडहरू लागि हल्ला, हँसिलो युवा र परिवार भेटी। विभिन्न आकार र जटिलता यी नीरस छैन सवारी ठूलो अवस्थामा अनुकूल कर्मचारी फेला परेन। राम्रो-natured र चंचल मुड vacationers ably एनिमेटरहरु द्वारा समर्थित।
र्शतहीन बोनस पनि राम्ररी राखिएको ठूलो र सहज बलौटे बीच छ, स्थित र टाढा धनी समुद्री जीवन प्रवाल। एक स्पा र विभिन्न पूर्वाधार पनि छ। अतिथिहरूको आरामदायक, शान्त, आकर्षक परिवारको लागि जटिल रूपमा होटल वर्णन।
यसलाई पर्यटक महत्वपूर्ण भूमिका मनोवृत्ति आफूलाई, कर्मचारीहरु मैत्री र आदर मनोवृत्ति खेल्छ। surly हुन छैन, आफ्नो छुट्टी सेवा मान्छे मुस्कान, तिनीहरूलाई अरबी, भन्दै अभिवादन "aghlen" वा "सलाम", धन्यवाद, र भन्नुभयो, "shu (क) क्रेन", भन्छन् शब्दहरू "ushufak" ( "हेर्नुहोस्") वा बिदा "maasalyama"। यो मलाई विश्वास, सरल प्राथमिक हो, तर, तपाईं सकारात्मक प्रतिक्रिया महसुस हुनेछ।
आफ्नो छुट्टी आनन्द लिनुहोस्!
भिटाली Kovalev: रचनात्मक लेखक
स्मार्टफोन LG E455 Optimus L5 II Dual: समीक्षा, विवरण, निर्दिष्टीकरण र समीक्षाहरू
प्रारम्भिक गर्भावस्था मा गर्भपात को लक्षण
पुरुष जस्तै महिला महिला हस्तियों